Wararka Maanta: Axad, May 26, 2013-Kooxo Hubeysan oo Soohdinta Soomaaliya iyo Kenya ku Dilay Shan ruux iyo Al-shabaab oo sheegatay Weerarkaas
Dhimashadan ayaa timid kaddib markii dabley aan la garanayn ay xalay weerareen booliis ku sugnaa deegaanada Dhamaajale oo ku dhow deegaanka Libooyo ee dalka Kenya, iyagoo dilay laba sarkaal iyo saddex qof oo shacab ah oo uu ku jiray wiil 15-jir ah.
“Waxaa lagu dilay weerarkaas shan qof,” ayuu yiri taliyaha booliiska gobolka Waqooyi-bari ee dalka Kenya, Charlton Mureithi oo la hadlay AFP, isagoo ku daray hadalkiis. “Waxaan heegan gelinnay ciidamada ku sugan xududdda si ammaanka loo adkeeyo.
Xarakada Al-shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya ayaa sheegatay inay mas'uul ka tahay weerarkaas, ayna fuliyeen koox yar oo dagaalyahannadooda ka tirsan, iyagoo xusay inay afduub kusoo qabsadeen laba qof oo Kenyan ah, ayna hub fara badan kusoo furteen.
"Koox ka tirsan dagaalyahannadeenna ayaa fuliyay weerarkaas, waxayna weerareen goobo ay ku sugnaayeen ciidammada Kenya, waxaana afduub kusoo qabsannay laba ruux oo Kenyan ah," ayay Al-shabaab ku sheegtay barta Twitter-ka ee ay isticmaasho.
Sidoo kale, Al-shabaab waxay sheegtay in weerarkaas ay ku dishay laba sarkaal oo Kenyan ah iyo afar qof oo shacab ah, balse ma sheegin khasaaraha iyaga kasoo gaaray dagaalka ay la galeen ciidamada Kenya.
Al-shabaab ayaa horay u haysatay laba qof ee Kenyan ah, kuwaasoo ay kusoo qabsatay weerar ay sannadkii hore ku qaadeen meel ku dhow degmada Wajeer ee gobolka Waqooyi-Bari ee dalka Kenya, kuwaasoo aan la ogeyn halka ay ku dambeeyaan.
Tan iyo markii ay ciidamada Kenay soo galeen gudaha Soomaaliya Oktoobar 2011 waxaa gudaha dalka Kenya ka dhacayay qaraxyo iyo dilal qorsheysan oo ay geysanayaan kooxo hubeysan oo la garanayn, inkastoo saraakiisha Kenya ay weerarradaas ku eedeeyeen Al-shabaab.
Ciidamada Kenya ee ku sugan Soomaaliya ayaa waxay qayb ka yihiin howl-galka Midowga Afrika ee AMISOM, iyagoo ku sugan qaybo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose oo ay ku jirto magaalada Kismaayo.
Weerarkan ayaa imaanaya iyadoo xalay uu dagaal culus ciidamada dowladda iyo kuwa Kenya oo dhinac ah iyo xoogagga Al-shabaab ay ku dagaalameen deegaanka Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose oo ku dhow soohdinta ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya.